दूर्जेय चेतना: लघुकथा: राहत
Browse » Home » कथा » लघुकथा: राहत
10 comments to “लघुकथा: राहत”
राहत शीर्षक देखेर पढ्दै गएको त बढो मार्मिक र महङ्गो राहत रहेछ । आम नेपालीको गाथा छ तीन परिच्छेदको सानो लघुकथामा । साँच्चै सशक्त लघुकथा!
दिलिप दाइ कै, प्रतिक्रिया मा सहमति जनाएँ मैले पनि ! आम नेपालीको गाथा छ तीन परिच्छेदको सानो लघुकथामा ।
कस्तो मार्मिक कथा रहेछ, यसमा एउटा जागिरे नेपालीको त्यो तस्विर प्रतिबिम्बित भएको छ, जुन तस्विर हामी सबै लुकाउन चाहन्छौं । त्यस्तो हुनु नपरोस भनेर सधै सतर्क हुनु पर्ने वा कम्तिमा त्यतिको नभएकोमा राहत महशुश गर्ने स्थितिका हामी नेपालीको आम विवशताको चित्र कोरिएको छ यहानेर । निकै मन छोयो ।
यी सन्तोकी संतोष सरले राहत महसुस गर्नु पर्ने कुनै ठाउँ नै नभए नि राहत महसुस गरेका छन्.... तर बास्तबिकता त्यही हो, उनले राहत महसुस नगरी धरै छैन....
थोरै शब्दले आम नेपालीको कथा बोकेको छ...
सानो शब्दले ठुलो यथार्त उनेको कथा "राहत "
कविता असंख्य प्रतिविम्ब तथा भावहरु बोकेको छ । समय र परिस्थितिहरुलाई नबुझ्दा देखिन्छन् यस्तै नियतिहरु । चुडामणि जी यो कवितामय पोष्टका लागि । यस्तै रोमान्टिक कविताहरुको आशामा छु है । ईश्वरले तपाईको सदैव भलो गरुन् ।
दूर्जेय जी --- मैले नि राहत महशुस गरे !ह्या प्याज लगाएको .... खल्लो हुदो रहेछ साच्ची !
अब निकलौ न नेपालीको प्रति व्यक्ति आय ! दुइ चार ओटा केही हात्ती र बाघका पत्ताहरू ... हो कि ! पकेटमा रहेको एक सुक्का ????
लघुकथाहरु साच्चिकै केहि परिच्चेदमै मन छुने हुदा रहेछन् !!! मर्मस्पर्शी छ राहत !!! आदत लाग्दै छ लघुकथाहरूको तर त्यो आदत को श्रेय चै हाम्रो दिलिप लाई लाई जान्छ !!
Ametya जी बास्तबमै लघुकथाहरु छोटो हुने र समस्त जीबनलाई केही हरपहरुमै ब्यक्त गर्न सकिने हुदा मलाई पनि खुब मन पर्छ पढ्नको लागी। बास्तबमै दिलिपजीका कथाहरु दमदार छन्। मैले पनि उपलब्ध भए जतीका सबै पढेको छु उहाका कथाहरु..
धेरैले भोगेको यथार्त जीबनलाई टपक्क शब्द मार्फत टिपेर कथा त्यो पनि लघु ---
पढ्दा लघु भए पछि आखा भरि चै चलचित्र झैँ छर्लंगै दृश्य बनि -----
मेरो मनको कुरा साथीहरुले नै लेखिसक्नु भा' भ र पो त ! नत्र मैले पनि उस्तै कमेन्ट लेख्नि थिए :)